ကျပ်သိန်း ၂ဝဝ ကျော် တန်ဖိုးရှိ တရားမဝင် အမဲသားခြောက် အိတ် ၇ဝ နှင့် တရုတ်လုပ် မုန့်မျိုးစုံမ?? - Yangon Media Group
ကျပ်သိန်း ၂ဝဝ ကျော်တန်ဖိုးရှိ တရားမဝင် အမဲသားခြောက်အိတ် ၇ဝ နှင့် တရုတ်နိုင်ငံလုပ်မုန့်မျိုးစုံများကို ရေပူအမြဲတမ်းစစ်ဆေးရေး စခန်းတွင် အောက်တိုဘာ ၂၁ ရက်က ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ကြောင်း အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ သိရသည်။ မန္တလေး-မူဆယ် ပြည်ထောင်စုလမ်းမကြီးတစ်လျှောက်တရား မဝင်ကုန်စည်များကို တားဆီးစစ် ဆေးလျက်ရှိသည့် ရေပူအမြဲတမ်း စစ်ဆေးရေးစခန်းပူးပေါင်းစစ် ဆေးရေးအဖွဲ့သည် အောက်တိုဘာ ၂၁ ရက်က GI Express ယာဉ်နှင့် Canter6ဘီးယာဉ်တို့ အားတားဆီးစစ်ဆေးခဲ့ရာ ယာဉ် ပေါ်၌တရားဝင် စာရွက်စာတမ်း အထောက်အထားတစ်စုံတစ်ရာ တင်ပြနိုင်ခြင်းမရှိသည့် အမဲသား ခြောက်အိတ် ၇ဝ (၂၆ဝဝကီလို ဂရမ်)နှင့် တရုတ်နိုင်ငံလုပ်မုန့်မျိုးစုံ ၄၅ဝ ဖာတို့အားဖမ်းဆီးရမိခဲ့ ခြင်းဖြစ်ကြောင်း အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှသိရသည်။
အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ”ဖမ်းဆီးရမိ တဲ့စုစုပေါင်းခန့်မှန်းတန်ဖိုးက ငွေကျပ် ၂၁၇ ဒသမ ၅ သိန်းခန့်ရှိပါတယ်။ စားသုံးရန်သင့်၊ မသင့် အထောက်အထားတွေလည်းမပါဘူး။ တရားဝင်ဘာထောက်ခံချက်မှလည်းမရှိတဲ့အတွက် ဖမ်းဆီးတာပါ။ ဒီစားသောက်ကုန်တွေသာစားသုံးရန်မသင့်တဲ့အစားအ သောက်တွေဖြစ်ခဲ့ရင် မီးရှို့ဖျက်ဆီးတာတွေလုပ်ဆောင်သွားမှာပါ” ဟု အောက်တိုဘာ ၂၂ ရက်က ဒီမိုကရေစီတူဒေးသို့ ပြောသည်။ ယင်း မန္တလေး-မူဆယ်ပြည် ထောင်စုလမ်းမကြီးတစ်လျှောက် ကုန်သွယ်မှုယာဉ်ပို့ကုန် ၅၃၅ စီး၊ သွင်းကုန် ၃၉၇ စီးမှကုန်စည်များ သယ်ယူပို့ဆောင်ခဲ့ပြီး ရေပူအမြဲ တမ်းစစ်ဆေးရေးစခန်းတွင် အောက်တိုဘာ ၂၁ ရက် တစ်ရက်တည်း တရားမဝင်အကောက်ခွန်မဲ့ကုန် ပစ္စည်းများကိုတားဆီးမှုနှစ်မှုဖြင့် ခန့်မှန်းတန်ဖိုးငွေကျပ် ၂၁၇ ဒသမ ၅ သိန်းခန့်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ခြင်းဖြစ် ကြောင်း သိရသည်။
၎င်းက ”ရေပူအမြဲတမ်းစစ် ဆေးရေးစခန်းပူးပေါင်းစစ်ဆေး ရေးအဖွဲ့အနေနဲ့ သတင်းရရှိတဲ့အပေါ် တားဆီးစစ်ဆေးတာရှိသလို ရှောင်ကွင်းလမ်းတွေ မန္တလေး- မူဆယ်ပြည်ထောင်စုလမ်းမကြီး တစ် လျှောက်ကုန်စည်ပို့ဆောင်တဲ့ ယာဉ်တွေကိုလည်းစစ်ဆေးပြီး တရားမဝင် အကောက်ခွန်မဲ့ကန့် သတ်ကုန်စည်တွေကို တားဆီးအရေးယူလျက်ရှိပါတယ်”ဟု ပြောသည်။ ယင်းရေပူအမြဲတမ်း စစ်ဆေး ရေးစခန်းတွင်အသားစို၊ အသား ခြောက်များ၊ အေးခဲအသားများ၊ သစ်သီးများ၊ စားသုံးရန်မသင့်သော မုန့်များစသည့် စားသောက်ကုန် ပစ္စည်းများ၊ သစ်များ၊ ကျောက်စိမ်းတွဲများ၊ မူးယစ်ဆေးဝါးများ စသည်တို့ကိုများသောအားဖြင့် ဖမ်းဆီးရ မိကြောင်း သိရသည်။
ဈေးများကို တည်ဆောက်ပြီးပါက စည်ပင်က ဈေးကောက်သာကောက်နေ၊ ဈေးများဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်ရန် တာဝ??